Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, September 07, 2011 Wednesday, September 07, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
ပြီးခဲ့တဲ့ ပိုစ့်မှာ ရှမ်းလူမျိုးတို့ဟာ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းတစ်ဝိုက်မှာ တိုင်းကားပြည်ရွာ တည်ထောင်ပြီး နေထိုင် ခဲ့ကြတာ မြန်မာလူမျိုးတို့ ပုဂံခေတ်ကို စတင်တည်ထောင်ချိန်နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ကျတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တရုတ်ပြည်မှာ ယခုထိတိုင် နေထိုင်ကြဆဲဖြစ်တဲ့ ရှမ်းလူမျိုးများအကြောင်း အနည်းငယ် ပြောပြချင်တာပါ။ ယခု တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်တို့မှာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် တစ်ထောင်ကျော်ခန့်က နန်ချောင်(နန်ချို) လို့ခေါ်တဲ့ ရှမ်းအင်ပါယာကြီးဟာ ကြီးကျယ် ခမ်းနားစွာ ရှိခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းများက ဆိုပါတယ်။ အေဒီ ၉ရာစုအချိန်မှာ တရုတ်ပြည်ကို အုပ်စိုးတဲ့ ထန်မင်းဆက်များက နန်ချောင်အင်ပါယာကြီးကို တိုက်ခိုက်နယ်ချဲ့လာတဲ့အတွက် နန်ချောင် အင်ပါယာကြီးဟာ အင်အားချိနဲ့လာခဲ့ပါတယ်။
အေဒီ ၁၁ရာစုမှာတော့ မွန်ဂိုလူမျိုးတွေက ထပ်မံနယ်ချဲ့ တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက် နန်ချောင် အင်ပါယာကြီး ဟာ အလုံးစုံ ပြိုကွဲသွားပါတော့တယ်။ နန်ချောင်ရှမ်းလူမျိုးတို့ဟာလည်း မူလဒေသ ယူနန်- တာလိ တစ်ဝိုက်ကနေ မြန်မာပြည်အတွင်း ရှမ်းတောင်တန်းများဆီသို့လည်းကောင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း စသော ဒေသများသို့လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ချောင်ဖရာမြစ်ဝှမ်းဆီသို့လည်းကောင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား စသော ဒေသအသီးသီးကို ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားကြောင်း မှတ်တမ်းများမှာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ရှမ်းလူမျိုးများဟာ အေဒီ ၆ရာစုကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၁ရာစုအရောက် နန်ချောင် အင်ပါယာ ပြိုကွဲမှုနဲ့ အတူ ဒေသ အသီးသီး ရောက်ရှိသွားတဲ့ ( ထိုင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီယား) အားလုံးတို့ဟာ ခုချိန်ထိ ဗုဒ္ဓသာသာ ကိုးကွယ်ဆဲဖြစ်သော ရှမ်း အဆက် အနွယ်များ ဖြစ်တာ ကို တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ယူနန်ဒေသကနေ အခြားဒေသအသီးသီးသို့ ရှမ်းလူမျိုးများ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေထိုင်ရာကို မှတ်တမ်းဖော်ပြထားတဲ့ တရုတ်မြေပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း ရှမ်းလူမျိုးတွေ အများအပြား ရောက်ရှိနေထိုင်လာကြရာ ကျွန်မ သည်လည်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ရှမ်းလူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးလို မြို့တွေ မှာ ကျောင်းတက်ချိန်တုန်းက စကာဝဲတဲ့ ကျွန်မကို “ဘယ်ကလာတာလဲ” လို့ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မက ကချင်ပြည်နယ်ကပါလို့ ပြန်ဖြေတဲ့အခါ “အော် ကချင်လူမျိုးကိုး” လို့ပြောကြပါတယ်။ “ကချင်လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ ရှမ်းလူမျိုးပါ” ဆိုပြန်တော့ “ဟင် ရှမ်းဖြစ်ပြီး ဘာလို့ ကချင်ပြည်နယ် ရောက်နေတာလဲ ရှမ်းပြည်မှာဘာလို့မနေတာလဲ” စသဖြင့် ပြောတာကို အမြဲ လိုလို ကြုံရပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း ရှမ်းလူမျိုးတွေ၊ ရှမ်းမြို့ပြ ကျေးရွာတွေ အများအပြား ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ ဗန်းမော်၊ ပူတာအို၊ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း၊ ဖားကန့်၊ လုံးခင်း၊ နမ္မတီး၊ ဟိုပင် ၊ ဝိုင်းမော် စသဖြင့် ရှမ်း အမည် ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ မြို့များစွာ ရှိပါတယ်။
ဟိုယခင်ချိန်ကတည်းက ယခုတရုတ်ပြည်ရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနယ်စပ်က ယူနန်ပြည်နယ်ဟာ ရှမ်းလူမျိုးတွေ အများစု နေထိုင်ခဲ့ကြသလို ခုချိန်ထိလည်း နေထိုင်ဆဲဖြစ်တာကြောင့် တရုတ်ပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်ထဲမှာလည်း ရှမ်းလူမျိုးတွေဟာ လူမျိုးစုတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ တရုတ်ပြည်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတို့ရဲ့ မြို့ရွာတွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ်။ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားတွေ ဟာ မြန်မာပြည်မှာလည်း တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်သလို တရုတ်ပြည်မှာလည်း ရှမ်းလူမျိုးဟာ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအဖြစ် ပါဝင်ဆဲပါ။
တရုတ် ယူနန်နယ်တစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့နေထိုင်တဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်ကြပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်းများဖြင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲစွာ နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည် ယူနန်ပြည်ထဲမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုတို့ဟာ မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးတွေအတိုင်း လုံချည် ကိုသာ နှစ်သက်စွာ ဝတ်ဆင်ကြပေမဲ့ မြန်မာစကားတော့ မပြောတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ အသုံးပြုတာက ရှမ်းစကားနဲ့ တရုတ်စကားသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ရှမ်း လူမျိုးတွေ နေထိုင်ရာ မြို့ရွာတိုင်းမှာ စေတီပုထိုးများကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ယူနန်ပြည်နယ် ရဲ့ မြို့တော်ဟာ ကူမင်းဖြစ်ပြီး ပန်းတွေ အလွန်ပေါကာ ရာသီဥတု ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ အလွန် ပူအိုက်နေချိန်ဆို ကူမင်းမှာ မပူမအေးတဲ့ ရာသီဥတုရှိတာကြောင့် တရုတ်တို့ရဲ့ နွေရာသီ အပန်းဖြေစခန်းမြို့အဖြစ် နာမည်ကြီးပြီး လာရောက် လည်ပတ်သူ များလည်း ပေါများလှပါတယ်။
မြန်မာပြည် နယ်စပ်ကနေ ကားနဲ့သွားရင် ၂နာရီနီးပါး မောင်းရပြီး မိုင် ၁၀၀ခန့် ဝေးတဲ့ တရုတ်ပြည်ထဲမှာ မန်စီလို့ခေါ်တဲ့ ရှမ်းမြို့ကြီးတစ်မြို့လည်း ရှိပါတယ်။ မန်စီဆိုတဲ့နာမည်ဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည် တွင်းမှာလည်း ရှိတတ်တဲ့ ရှမ်းနာမည်ဖြစ်တာကိုလည်း သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ မန်စီမြို့ဟာ ရှမ်းနဲ့ တရုတ် လူမျိုးတို့ နေထိုင်ကြတဲ့မြို့ ဖြစ်ပြီး လမ်းမကြီးတွေရဲ့ ဘေးတစ်လျှောက်လုံးမှာ စားပင်များ၊ အလှပင်များကို လှပညီညာစွာ စိုက်ပျိုးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သရက်ပင်စိုက်တဲ့လမ်းဆိုရင် အဲဒီလမ်းတစ်လျှောက်လုံး ဘယ်ရောညာပါ သရက်ပင်ချည်းဘဲ တွေ့ရပြီး ပိန္နဲပင်တန်း ဆိုရင်လည်း ဘေး၂ဘက်လုံး ပိန္နဲပင်တွေချည်း စိုက်ထားပါတယ်။
ကျွန်မရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ သရက်သီးနဲ့ ပိန္နဲသီးတွေ သီးချိန်ဖြစ်လို့ လမ်းဘေးက အပင်တွေမှာ သရက်သီး၊ ပဲန္နဲသီးတွေ ပြွတ်ခဲနေအောင် သီးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် ဘယ်သူကမှ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မခူးကြဘဲ အပင်ပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းရှိနေခဲ့တာကို အံ့သြမိရင်းက ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့သာ ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်ရှေ့က လမ်းပေါ်မှာ ခုလိုအပင်တွေများ ရှိနေခဲ့ရင် ပိန္နဲသီးလေးပြုတ်ပြီး ချက်စားမိမလား၊ သရက်သီးလေးခူး မြုပ်တို့မိမလား မပြောတတ်ပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်မြို့ကဖြစ်ပါစေ စည်းကမ်းရှိတဲ့ အကျင့်ကောင်းများ ကိုတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အတုယူသင့်တာ အမှန်ပါဘဲရှင်။
သရက်သီးများသီးနေတဲ့ လမ်းဘေးဝဲယာက သရက်ပင်တန်း
အဝေးက လှမ်းမြင်ရတဲ့ မိုင်းခွန်းစေတီတော်
မန်စီမြို့မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ အင်မတန်သပ္ပါယ်တဲ့ မိုင်းခွန်းစေတီ ရှိပါတယ်။ တည်ထား ကိုးကွယ်တော်မူတဲ့ မိုင်းခွန်စေတီဟာ မန်စီမြို့တစ်မြို့လုံးကိုဆီးပြီး မြင်နိုင်တဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ သပ္ပါယ်လှစွာ တည်ရှိပါတယ်။ မန်စီမြို့မရောက်ခင်မှာ နတ်သမီးသုံးဖော်လှိုဏ်ဂူ (အဲဒီလှိုဏ်ဂူအကြောင်း ဒီနေရာမှာ ရေးပြီးပါပြီ) ကို ဝင်ခဲ့သေးတာမို့ ဗိုက်က အတော်ကို ဆာနေပါပြီ။ ဒါနဲ့ ဘုရားဝင်မဖူးနိုင်သေးဘဲ ထမင်းဆိုင် အရင်ရှာရပါတယ်။ တရုတ်စာထက် ရှမ်းစာကို ပိုပြီးစားလိုတာကြောင့် မန်စီမှာရှိတဲ့ ရှမ်း ထမင်းဆိုင်တွေချည်း ရှိတဲ့နေရာကို သွားကြပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်တွေကို မြန်မာစကားမတတ်ဘူးထင်ပြီး သူငယ်ချင်းတရုတ်မလေးကိုသာ အားကိုးပြီး ဟင်းတွေ မှာပြုကြရာမှာ ဆိုင်ရှင်ကမြန်မာ စကားနဲ့ ပြန်ပြော တာကြောင့် အံ့သြမိရပြန်ပါတယ်။ နောက်တော့မှာ ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူက မြန်မာပြည်ကနေ လာပြီး ဆိုင်ဖွင့်ထားတာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
တစ်မြို့တစ်ရွာမှာာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်လူမျိုးချင်း တွေ့ကြတဲ့အခါ လှိုက်လှဲစွာ ဖော်ရွေဂရုစိုက်ကြတဲ့ ထုံစံအတိုင်း ဆိုင်ရှင်က လိုလေသေးမရှိ ဟင်းပွဲတွေဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ မန်စီရောက် ရှမ်းထမင်းဆိုင်ရဲ့ ဟင်းပွဲများကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အောက်က ပုံထဲက ဟင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းအမျိုးအမည်များကို ပြောရရင်
၁.ခွက်အကြီးဆုံးက ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကို ပဲပုတ်နဲ့ ချက်ထားတဲ့ ရှမ်းဟင်းချိုပါ။
၂. သူ့ဘေးညာဘက်ကတော့ ငါးခူချဉ်စပ် ချက်ပါ။
၃. နောက်တစ်ခွက် မှိုဥကြော်ပါ။
၄.ဝက်သားပါးပါးလှီးပြီး အလည်ကောင်က အချဉ်ရည်နဲ့ တို့စားဖို့ပါ
၅.ဝက်သားနဲ့ သရက်သီးအစိမ်းကို ကြော်ထားတာပါ။ ဒီဟင်းလေးကြိုက်လို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပြန် လုပ်စား ဖြစ်ပါတယ်။
၆.ခရမ်းသီးနဲ့ ငရုပ်ပွကို မီးဖုတ်ပြီး သုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်းပွဲတွေစုံချိန်မှာတော့ ဗိုက်ဆာတာ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရတော့တာမို့ တူကို မလွှတ်တမ်း လက်ကကိုင်ပြီး အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ စားသောက်ကြပါတော့တယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့ ဘုရားဖူးဖို့ ခရီးဆက်ကြပြန်ပါတယ်။ မန်စီမရောက်ခင် လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီးရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ယူသွားတဲ့ ကင်မရာရော၊ ဖုန်းပါ အားကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းကို ဘက်ထရီအသစ်ထည့်ဖို့အတွက် မြို့ပတ်ပြီး ဖုန်းဘက်ထရီ ရှာရပြန်ပါတယ်။ ဖုန်းဆိုင်တွေ များလှပေမဲ့ လိုချင်တဲ့ ဘက်ထရီအမျိုးအစား ရဖို့ အတွက်တော့ တော်တော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့မှ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရလိုက်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဆိုင်ရှင်က သူ့မှာ မရှိလို့ တခြားနေရာက သွားယူလာပေးဟန် တူပါတယ်။ ဒါကြောင့် တော်တော် ကြာအောင် စောင့်လိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ရလိုက်တာ ကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ မဟုတ်ရင် ရှေ့ဆက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုနောက်လာမဲ့ ပုံတွေကို ဖုန်းနဲ့သာ ရိုက်ခဲ့ရတာမို့ မကြည်မလင် မပီမသ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ သည်းခံပေးကြဖို့ ကြိုတင် တောင်းပန်ချင် ပါတယ်။
မိုင်းခွန်စေတီရှိရာ တောင်ပေါ်ကို ကားနဲ့စတက်ပါပြီ။ လမ်းမကြီးကနေ တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ လမ်းခွဲမှာ ခုလိုဆိုင်းဘုတ်လေးကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆိုင်းဘုတ်ကို ရှမ်းဘာသာ၊ ကချင်ဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာ စသည့် ဘာသာ၅မျိုးဖြင့် လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
ရှေ့က ခြင်္သေ့ကြီး ၂ကောင်ကကြိုနေပါပြီ။ ကားတွေကို ဒီနေရာအထိဘဲ မောင်းခွင့်ပြုထားပြီး ကားကိုထားခဲ့ကာ အရှေ့က တန်းထားတဲ့ နေရာကနေ ဘုရားရှိရာကို လမ်းလျှောက်တက်ရပါတယ်။
စေတီအတွင်းထဲကို မဝင်သေးဘဲ ရင်ပြင်တစ်လျှောက် လှည့်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါ စေတီရဲ့ အရှေ့နားမှာ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ရွှေကြက်ဖ ရုပ်ထုကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။ ဟိုးယခင် မြတ်စွာဘုရားနုစဉ်ဘဝက ဒီတောင်ကုန်းကြီးပေါ်မှာ ကြက်မင်းဘဝနဲ့ နေထိုင်သွားခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုင်းခွန်ရွှေစေတီကိုလည်း ဘုရားလောင်း ကြက်မင်းဘဝက နေခဲ့တဲ့ ဒီကုန်းထိပ်မှာ တည်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ရွှေကြက်ဖရုပ်ကြီးကို ထုလုပ်ထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
စေတီအတွင်းမှာတော့ လေးမျက်နှာမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပုံတော် ၂ပုံ၊ ဥတည်ဘွားပုံတော်တစ်ပုံ၊ ကွမ်ရင်မယ်တော်ပုံတော်တို့ရဲ့ ပုံတော်များကို ကိုးကွယ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ်ပြည်လက်ရာ ဖြစ်တာကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ရုပ်ပုံတော်ဟာလည်း တရုတ်လက်ရာများသာ လွှမ်းမိုးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ကွမ်ရင်မယ်တော်၊ ဥတည်ဘွားတို့ကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ တစ်တန်းတည်း ပလ္လင်ပေါ်မှာ တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက် စိတ်ထဲတော့ အနည်းငယ် ကသိကအောက်တော့ ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဒီလိုအနေအထားမျိုး သိပ်တွေ့ရလေ့ မရှိတာကြောင့်လည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။
စေတီအတွင်း နံရံနဲ့ကပ်လျက်မှာတော့ ﻿သစ်သားများကို အနုစိတ်လက်ရာမြောက်စွာ ထွင်းထုထားတဲ့ ပန်းပုရုပ်ကြွများကို လှပခမ်းနားစွာ ပြသထားပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ နံရံများပေါ်က ပြတင်းပေါက်တွေကနေ အလင်းရောင်က ဝင်နေတဲ့အတွက် အလင်းပြန်နေခဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ရာမှာတော့ အဆင်မပြေဘဲ ပုံနည်းနည်းသာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပါ။ ဘုရားပုံတော်များနဲ့ ကျောက်စိမ်းပန်းပု၊ လက်ကောက်၊ စတာတွေလည်း ရောင်းပါတယ်။
စေတီရင်ပြင်မှာ ခုလို ထိုင်စရာကျောက်တုံးခုံလေးတွေ ကျောက်စားပွဲတွေရှိပါတယ်။
မန်စီကို အတူသွားကြတဲ့ ညီမငယ်ရှမ်းမလေးပါ. မျက်နှာမြင်ရင် မိတ်ဆက်စာတွေ ပလူပျံလာမှာစိုးလို့ ပန်းပွင့်လေးနဲ့ ဖုံးထားလိုက်တယ်း) အဓိကက ကျောက်ခုံကြီးတွေကို ပြချင်တာပါ။
ဘုရားကုန်းပေါ်ကနေ မန်စီမြို့ကြီးကို ခုလို လှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်
မြို့မြင်ကွင်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ညို့ညို့ဆိုင်းဆိုင်း တောင်တန်းကြီးတွေ
ဘုရားပေါ်မှာ ရှိနေစဉ်မှာပဲ တိမ်တွေ မဲမှောင်အုံ့ဆိုင်းလို့ လာတာကြောင့် တောင်ပေါ်ကနေ အမြန်ဆုံး ပြန် ဆင်း လာကြ ပါတော့တယ်﻿။ ကားပေါ်ရောက်လို့ ကားထွက်ပြီဆိုတော့မှ ကိုရွှေမိုးက သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာချပါလေတော့တယ်။ မြို့တွင်းကို ပြန်ရောက်ချိန်မှာ သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာနေတဲ့မိုးကြောင့် ကားမှန်လဲ ဖွင့်လို့ မရနိုင်တော့ ဓာတ်ပုံတွေ မရိုက်နိုင်တော့ ပါဘူး။ မြို့တွင်းက ဈေးဆိုင်တွေလည်း လျှောက် မလည်နိုင်ခဲ့ တော့ပါဘူး။
ဒီနေရာကတော့ မြို့နေလူထု အနားယူအပန်းဖြေတဲ့ ပန်းခြံထဲက ရင်ပြင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား တို့ရဲ့ ရိုးရာပွဲလမ်းသဘင်တွေကို ဒီနေရာမှာ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရဟာ ကချင်၊ ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သင်္ကြန်ပွဲ၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ မနောပွဲ စတဲ့ ရိုးရာပွဲလမ်းသဘင်တွေကို ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပပေးလေ့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုးက ရွာနေတော့ အထဲကို မဝင်နိုင်တော့တာနဲ့ ဒီရှေ့နားမှာ ကားခဏရပ်ပြီး ရင်ပြင်ကြီးကို ဒီအတိုင်းလေး ရပ်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ ကားရပ်ထားတုန်း ကားမှန်လေးတင်ပြီး ဓာတ်ပုံကမန်းကတန်း ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့။ အချိန်လည်း မနည်းပြီမို့ ရှမ်းလူမျိုးတွေများစွာ နေထိုင်ကြတဲ့ မန်စီမြို့ကို မိုးရေတွေ အောက်မှာ နှုတ်ဆက်လို့ ထားခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြ ပါတော့တယ်ရှင်။
ပုဂံရာဇဝင်ထဲက စောမွန်လှရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေသို့...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, September 05, 2011 Monday, September 05, 2011 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း , ဆောင်းပါး
ကျွန်မတို့ရဲ့ မြန်မာရာဇဝင်တွေထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာလည်း အခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုကနေ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း အသိပါဘဲ မဟုတ်လားရှင်။ အဲဒီလို ကျော်ကြားထင်ရှားခဲ့တဲ့ ရှေးရာဇဝင်ထဲက အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြဖို့ ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင် ပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်းရဲ့ မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်သူ ရှမ်းမင်းသမီး စောမွန်လှကို ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်။ မိဖုရားစောမွန်လှဟာ ချောမောလှပ စိတ်ထားကောင်းကာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်ပြီး သာသနာပြုဖို့အတွက် စေတီပုထိုးများကို သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာ ဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့သူ အဖြစ်ရာဇဝင်မှာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ စောမွန်လှရဲ့ မွေးရပ်ဌာနေဟာ မောရှမ်းတို့ရဲ့ တောင်တန်းမြေက စယ်လန့်ဆိုတဲ့ ရွာကလေးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့က ရှမ်းမင်းသမီး စောမွန်လှဟာ မိုးကောင်းစော်ဘွားကြီးရဲ့ သမီးလို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ သို့သော် စောမွန်လှရဲ့ မူလဇာတိဒေသဟာ ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ရောက်နိုင်မဲ့ မောတို့ရဲ့ ဒေသ စယ်လန့်က ဖြစ်ပါတယ်။
စောမွန်လှဟာ ရှမ်းပြည်နယ်သူ စယ်လန့်ဇာတိဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားများ ယနေ့တိုင် ရှိနေသေးတာကို စယ်လန့်ကို ရောက်ဖူးခဲ့ရင် တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စယ်လန့်ရွာဟာ ရှမ်းပြည်နယ်က မူဆယ်မြို့နဲ့ နမ်းခမ့်မြို့အကြားမှာ တည်ရှိနေတဲ့ရွာဖြစ်ပြီး စယ်လန့်သူတွေဟာ အင်မတန် ချောမောလှပတယ်လို့ ခုချိန်ထိလည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒီအဆိုစကား မှန်မမှန် ပုဂံရာဇဝင်ကို နောက်ပြန်လှန်လို့ ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် အသားအရေ ဖြူစင်ဝင်းနှစ်ပြီး ပါးအို့လေးများ နီစွေးနေတဲ့ မောပျိုဖြူ မင်းသမီးလေးကို အနော်ရထာမင်းက တော်ကောက် သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဟာဖြင့် ရှမ်းမင်းသမီးလေးရဲ့ လှပချောမောမှုက ထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှမ်းမင်းသမီးလေး စောမွန်လှနဲ့ ပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်းတို့ရဲ့ မေတ္တာဇတ်လမ်းလေးကို နောက်ပြန်လို့ သွားကြည့်ကြရအောင်လားရှင်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၀၀ လောက်ကတည်းက ရှမ်းလူမျိုးတို့ဟာ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်မှာ တိုင်းပြည်တည်ထောင်ပြီး ရှမ်းစော်ဘွားများက စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်တည်ထောင်ချိန်ဟာ ပုဂံနေပြည်တော်ကြီးကို တည်ထောင်ချိန်နဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ကျတယ်လို့ ဆရာကြီး ဘီအေဦးဘသန်း ရေးသားပြုစုတဲ့ မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်းမှာ ဖော်ပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၃၀၀ကျော်ခန့်အချိန်ဟာ မောရှမ်းတို့ရဲ့ ပြည်နယ်ကိုးခုကို အုပ်ချုပ်တဲ့ ရှမ်းစော်ဘွားကြီး စဝ်ဆေခန်ဖဟာ စယ်လန့်လို့ ယခုတိုင်ခေါ်ဆိုဆဲဖြစ်တဲ့ ဒေသမှာ ထီးနန်းစိုက်ကာ စိုးစံနေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ စော်ဘွားကြီး စဝ်ဆေခန်ဖ နတ်ရွာစံပြီး နောက်မှာတော့ သားတော်ဖြစ်သူ စဝ်ဆေဟုံဖက ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ စော်ဘွားကြီး စဝ်စေဟုံဖနဲ့ မိဖုရား အဂ္ဂမဟေသီဒေဝီတို့ကနေ သက္ကရာဇ် ၃၉၅မှာ သမီးတော်လေး စောမွန်လှကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
၄၁၈ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါ ပုဂံနေပြည်တော်ကို စိုးစံတော်မူတဲ့ အနော်ရထာမင်းဟာ ဥတည်ဘွားမင်း စိုးစံနေတဲ့ ဂန္ဓလရာဇ (ဂန္ဓလရာဇ်) ခေါ် တရုတ်ပြည်ကို သွားရောက်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ စွယ်တော်အစစ်ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို ဖူးမျှော်ပါတယ်။ တရုတ်မင်း ဥတည်ဘွားက လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ မြဘုရားတစ်ဆူကို ပင့်ဆောင်ပြီး တရုတ်ပြည်က အပြန်မှာ စယ်လန့်နေပြည်တော်နဲ့ မဝေးလှတဲ့ ရွှေလီမြစ်ကမ်းက ဟိုလောင်းရွာကလေးမှာ စခန်းချနေပါတယ်။ အဲဒီလို စခန်းချ နားနေစဉ်မှာ ရှမ်းတို့ရဲ့ ဥသျှောင် စယ်လန့်စော်ဘွား စဝ်ဆေဟုံဖနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘုရင် မင်းဧကရာဇ်များရဲ့ထုံးစံ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ ပေးဆက်ကြရိုး ထုံးစံရှိကြရာ ရှမ်းမင်းသမီးလေး စောမွန်လှဟာလည်း ပဏ္ဍာ ဆက်ခံရတဲ့မင်းသမီး ဖြစ်လာပါတယ်။ အနော်ရထာမင်းကြီး ပုဂံပြည်ပြန်အကြွမှာတော့ စောမွန်လှ မင်းသမီးလေးကို စုလျားရစ်ပတ် လက်ထပ်သိမ်းမြန်းလို့ ရွှေနန်းတော်ကြီးဆီ ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
ပန်းချီဆရာ မောင်ကျော်ညွှန့်၏လက်ရာ မိဖုရားစောမွန်လှ
အသားအရေ ဖြူစင်ဝင်းပကာ ချောညက်လှပသူ မင်းသမီးလေး စောမွန်လှဟာ ရုပ်ရည်တင်မက နှလုံးရည်လည်း ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ မိန်းမမြတ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ နက်မှောင်သန်စွမ်းလွန်းတဲ့ စောမွန်လှမင်းသမီးရဲ့ ဆံကေသာဟာ ဖြန့်များချထားခဲ့ရင် မြေကြီးနဲ့ထိလုနီးပါး ရှည်လျားလှတယ်လို့ မှတ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။ မင်းသမီးဟာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကို နှစ်သက်ကြည်ဖြူစွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓာတ်တော်များကိုပင် သူမရဲ့ နားတောင်းအတွင်းမှာ ဌာပနာပြီး ကိုးကွယ်ပူဇော်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွန် ကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ မင်းသမီးဟာ ပုဂံနေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိစဉ်မှာလည်း ပုဂံပြည်ကြီးကို ဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တဲ့ ရဟန်းတော် ရှင်အရဟံ အစရှိသော သံဃာတို့ကို ဆွမ်းကွမ်းမပြတ်အောင် သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးကာ နန်းတော်တွင်းမှာ ချက်ပြုတ် လှူဒါန်းပါတော့တယ်။ သံဃာတော်များရဲ့ တရားတော်ကိုလည်း အမြဲတမ်း နာယူလေ့ရှိပြီး သူမကိုယ်တိုင်လည်း တရားဓမ္မတို့ကို နေ့စဉ် ရွတ်ဆိုပူဇော်ကာ နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားများကိုပါ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နက်နက်နဲနဲ ကိုးကွယ်တတ်လာစေရန် တိုက်တွန်း အားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အနော်ရထာမင်းကြီးမှာ မိဖုရား၊ မောင်းမိဿံ အခြွေအရံပေါများလှပေမဲ့ စိတ်နှလုံး ဖြူစင်ပြီး ဘာသာရေးကိုလည်း အလေးအနက် ကိုးကွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တောင်တန်းဌာနေသူ ရှမ်းမင်းသမီးလေး စောမွန်လှကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အချစ်ပိုပြီး အများနဲ့မတူ မြတ်နိုးသဒ္ဓါ ထူးခြားစွာ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီး တည်ထားရာသို့ပင် မိဖုရားစောမွန်လှကိုသာ မင်းကြီးအနော်ရထာက ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ နန်းတွင်းရေးရာများကြားမှာ မင်းသမီးလေးစောမွန်လှ ကံမကောင်းခဲ့ရှာပါ။ မင်းတရား အနော်ရထာရဲ့ ချစ်ခင်လေးမြတ်ခြင်းကို ပြိုင်ဘက်ကင်းစွာ ရရှိခဲ့ပေမဲ့ မင်းတရားကြီးရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်း၊ အစစ ဦးစားပေးခြင်း၊ အလေးအနက် ထားခြင်းတို့အပေါ် မလိုမုန်းထားရှိခဲ့သူက မိဖုရားခေါင်ကြီး သီရိမာလာဒေဝီကိုယ်တိုင်၊ မိဖုရားကြီးရဲ့ အမှုထမ်းများနဲ့ နန်းတွင်းသူအချို့ပါ။
မင်းသမီး စောမွန်လှအပေါ် မကျေနပ် မနာလိုတဲ့ အမုန်းမီးတောက်တွေ လောင်မြိုက်နေတဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီးက နန်းတွင်းသူ၊ နန်းတွင်းအရာထမ်းများကို သူ့ဖက်ပါအောင် သိမ်းသွင်းပြီး စောမွန်လှကို အရှက်တကွဲဖြစ်အောင် အမျိုးမျိုး ကြံဆောင်ကြပါတော့တယ်။ မင်းသမီးစောမွန်လှက မိဖုရားခေါင်ကြီးနဲ့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ရလေအောင် ဘယ်လိုပင်ရှောင်ပေမဲ့ အငြိုးကြီးတဲ့ မိဖုရားကြီးက နည်းမျိုးစုံနဲ့ စောမွန်လှ နာမည်ပျက် အရှက်ရအောင် လုပ်တော့တာပါဘဲ။ ကိုယ်တိုင်ထိခိုက်စော်ကားလို့ အားမရ မင်းတရား အနော်ရထာထံ ဝင်ရောက်ခစားပြီး တောင်ပေါ်သူ ရှမ်းမင်းသမီး စောမွန်လှဟာ ၁၂ကြိုး ကဝေ စုန်းအတတ်ကို တတ်မြောက်သူ စုံးမဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဂုံးတိုက်ချောစား လုပ်ပါတယ်။
စောမွန်လှကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီး ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ မင်းကြီးဟာ မိဖုရားခေါင်ကြီးနဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ဂုံးတိုက်စကားကို ဘယ်လိုမှ မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်း တစ်ညမှတော့ ဆီမီးအလင်းရောင်များ ငြိမ်းနေပေမဲ့ မင်းသမီးလေး စောမွန်လှအခန်းမှာတော့ တလက်လက်နဲ့ တောက်ပနေတဲ့ အရောင်များထွက်နေတာကို မင်းကြီးကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်နိုင်အောင် မိဖုရားကြီးအဖွဲ့က တိုးတိုးတိတ်တိတ် ခေါ်ပြပါတော့တယ်။ ဘုရင် အနော်ရထာက နောက်တစ်နေ့မှာတော့ မင်းသမီးလေးကို ညသန်းကောင် မီးရောင်တစ်လက်လက် ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စ မေးမြန်းပါတော့တယ်။ တကယ်တမ်းတော့ စောမွန်လှရဲ့ အခန်းထဲက တောက်ပနေတဲ့အရောင်များဟာ မင်းသမီး ဘုရားရှိခိုးချိန်မှာ နားတောင်းအတွင်းမှ ဌာပနာထားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓာတ်တော်များမှ ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း မင်းသမီးစောမွန်လှက မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ရဟန်းသံဃာ၊ ရတနာ သုံးပါးကလွဲလို့ အခြားဘယ်လို ကိုးကွယ်မှုမျိုးကိုမှ မယုံကြည် မကိုးကွယ် လက်မခံခဲ့ကြောင်း မင်းတရားကို အခိုင်အမာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း “သူမကို မယုံကြည်ဘူးဆိုခဲ့ရင် နန်းတော်ကနေ ထွက်ခွာခွင့်ပြုပါ၊ သူမ မရှိခဲ့ရင် နန်းတော်တွင်းမှာ ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းပါလိမ့်မယ်။ မွေးရပ်ဌာနေ မောရှမ်းမြေကို ပြန်ပါရစေ”လို့ အနော်ရထာ မင်းကြီးထံ ခွင့်တောင်း အသနားခံပါတယ်။
ဆရာမောင်ကျော်ညွှန့်၏ သရုပ်ဖော်ပန်းချီထဲက မိဖုရားစောမွန်လှ
မင်းသမီးလေးကို စုန်းကဝေမလို့ ယုံကြည်သွားခဲ့တာကြောင့်လား၊ သို့မဟုတ် နန်းတွင်းမှာ ဆက်နေမယ်ဆိုရင် စောမွန်လှမင်းသမီးလေး ပိုပြီး စိတ်ညစ်ရမှာကို စိုးရိမ်တာကြောင့်ဘဲ ပြည်တော်ပြန်ခွင့် ပြုခဲ့တာလား ဆိုတာကျုတော့ မင်းတရားအနော်ရထာ ကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံး ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ ချစ်သူမျက်နှာ တစ်ရွာမှတ်ကာ နောက်တော်ပါးသို့ လိုက်ပါခစားခဲ့ပေမဲ့ ကံတရားက ဖန်လာတာကြောင့် ပြည်တော်ကို ပြန်ချိန်ကျပြီလို့ ဆုံးဖြတ်မိတဲ့ စောမွန်လှမင်းသမီးဟာ မင်းတရားအနော်ရထာကို နောက်ဆုံးဖူးမျှော်ခြင်းနဲ့ ဦးတိုက်ရှိခိုးကာ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ရွှေနန်းတော်ကြီးကနေ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ မပြီးသေးသော ရွှေစည်းခုံစေတီကြီးကိုလည်း မျှော်ရည်မှန်းဆကာ ဦးချလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ပုဂံနန်းတော်ကြီးနဲ့ မင်းတရားအနော်ရထာကို မျက်ရည်ဝေသီ ဆို့နင့်ကြေကွဲစွာ နှုတ်ဆက်လို့ စိတ်နှလုံး ညိုးချုံးနွမ်းနယ်စွာနဲ့ ရွှေနန်းတော်ကနေ သန်မြန်စွာဆင်ကြီးကိုစီးကာ ထွက်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်။
သို့သော်လည်း ကံခေလွန်းရှာတဲ့ ရှမ်းမင်းသမီးလေး စောမွန်လှဟာ သူမရဲ့ မွေးဖွားရာဇာတိ စယ်လန့်နေပြည်တော်ကိုတောင် မရောက်နိုင်ဘဲ လမ်းတစ်ဝက် သီပေါမှာတင် ကံတော်ကုန်ခဲ့ရှာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မြတ်နိုးကိုးကွယ်ခဲ့သူ မင်းသမီးစောမွန်လှဟာ ပုဂံနေပြည်တော်မှ ရှမ်းတောင်တန်းများဆီ ပြန်အလာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ စေတီပုထိုးတို့ကို တည်ထားခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သူ မိဖုရားစောမွန်လှရဲ့အကြောင်း ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင် သူမရဲ့ မွေးရပ်ဌာနေ မောရှမ်းမြေက စယ်လန့် နေပြည်တော်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ စောမွန်လှရဲ့ ဇာတိ စယ်လန့်ရွာကလေးဆီ ကျွန်မနဲ့အတူ အလည် သွားကြရအောင်လားရှင်။
စောမွန်လှရဲ့ မွေးရပ်ဌာနေ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းက စယ်လန့်ကို သွားရောက်ဖို့အတွက် မြင့်မားလှတဲ့ ရှမ်းတောင်တန်း ကြီးတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် စည်ကားလှတဲ့ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်က မူဆယ်မြို့ကိုပါ ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ မူဆယ်မြို့အကြောင်းကိုတော့ နောက်များမှ ဆက်ရေးမှာမို့ အခုချိန်မှာတော့ မူဆယ်မြို့ကို ကျော်လွန်ပြီး စယ်လန့်ရွာကလေးကို အရင်သွားပါ့မယ်ရှင်။
မှိုင်းညို့ညို့တောင်တန်းများနဲ့ ရွှေလီမြစ်ရဲ့ အလှ
မူဆယ်မြို့ကို ကျော်လွန်ပြီး စယ်လန့်ရွာကိုအသွားမှာ လမ်းတစ်လျှောက်စိမ်းစိုလှပနေတဲ့ လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းတွေကို စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖွယ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိဖုရားစောမွန်လှရဲ့ ဇာတိစယ်လန့်ရွာကလေးကို ရောက်ပါပြီ။
ရွာလယ်လမ်းမကြီးကနေ ရွာအစွန်ဘက် ချိုးကွေ့လာပြီး ခုလို လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်နဲ့အတူ
ဟိုမှာ စောမွန်လှရဲ့ ဟော်နန်းတော်ဟောင်းရဲ့ မုဒ်ဦးကို လှမ်းမြင်နေရပြီ။
တောင်ကုန်းတစ်ခုလုံး မယ်ဇလီပင်တွေ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ လွမ်းချင့်စဖွယ်
တစ်ချိန်ကတော့ ဟောဒီကုန်းကြီးဟာ ကြီးကျယ်စည်ကားခဲ့တဲ့ ရှမ်းတို့ဌာနေကို ပိုင်စားသူ စော်ဘွာကြီးတို့ရဲ့ နန်းတော်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ မိဖုရားစောမွန်လှရဲ့ မွေးဖွားကြီးပြင်းရာ၊ ပျော်စံရာ ဇာတိမြေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး အေးချမ်းနေတဲ့ ဘုရားတရားရိပ် ဖြစ်နေလေခဲ့ပြီ။
စောမွန်လှ ဟော်နန်းတော် နေရာမှာ တည်ထားတော်မူသော စေတီနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
စောမွန်လှ နန်းဦးစေတီ ဆိုင်းဘုဒ်
သာသနာတော်ကို အကျိုးဆောင်ခဲ့သူ မိဖုရားစောမွန်လှ မွေးဖွားရာအရပ်အဖြစ် အမှတ်တရ အနေနှင့် ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ တည်ထားတော်မူသော ကိုးတောင်ပြည့် နန်းဦးစေတီနှင့် ကျောက်စာတိုင်များ
ကျောင်းဆောင်အတွင်းမှ ထိုင်းလက်ရာဖြစ်ဟန်တူသည့် ဆင်းတုတော်
တောင်ကုန်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ စောမွန်လှစံမြန်းတဲ့ ဟော်နန်းတော်
စောမွန်လှအတွက် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားတဲ့ ဟော်နန်း
ဟော်နန်းအတွင်းမှာတော့ မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်နေသည့်ဟန် ထုလုပ်ထားသည့် မိဖုရားစောမွန်လှရုပ်ထုနှင့် လှူဒါန်းထားကြသော အုန်းငှက်ပျောပွဲများ
ရှမ်းဝတ်စုံဖြင့် လှပပြေပြစ်တင့်တယ်စွာ ထုဆစ်ထားသည့် မိဖုရားစောမွန်လှရုပ်ထုပုံ
ဒီမှာလည်း စောမွန်လှ နန်းတော်ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦတစ်ခုပါ။ အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်ရာဌာန ဖြစ်တာနဲ့အညီ သက်သပ်လွတ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဘာတွေရှိမလဲလို့ အတွင်းထဲကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါဦးစို့ရဲ့..
မိဖုရား စောမွန်လှနဲ့ မောင်ဖြစ်သူ စိုင်းစောနောင်တိုရဲ့ ရုပ်ထုများကို အိပ်ရာခမ်းနား အဆင်တန်ဆာများဖြင့် တွေ့ရပါတယ်။
ရှမ်းအမျိုးသားတို့၏ ရိုးရာဝတ်စုံ လက်သုံးတော်ဓါး အဆင်အယင်များဖြင့် မောင်တော် စိုင်းစောနောင်
ရှမ်းလူမျိုးတို့ရဲ့ မီးရှူးတန်ဆောင် မိဖုရားစောမွန်လှအတွက် ကျောက်စာတိုင်
မိဖုရား စောမွန်လှ ရှိစဉ်က ရေချိုးတော်မူရာ ကန်တော်နေရာတွင် အမှတ်တရ ဆောက်လုပ်ထားသည့်ရေကန်
စယ်လန့်နေပြည်တော်တွင် စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့သော စော်ဘွားများအဆက်ဆက် အသုံးပြုခဲ့သည့် ရေတွင်း
နှောင်းခေတ်လူများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့်ရေတွင်းသို့ အနီးကပ်
ပြန်ပါဦးမယ် နှုတ်ဆက်ပါတယ် အစ်မတော်..
မိဖုရားစောမွန်လှရဲ့ အထ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်း တစေ့တစောင်း ဖော်ပြရာမှာ တုတ်ထမ်း၊ ဓါးထမ်း ငြင်းရတဲ့ ပုဂံရာဇဝင်များရဲ့ အငြင်းပွားမှုမျိုးနဲ့ ဖော်ပြလိုတာမဟုတ်ဘဲ မိဖုရားစောမွန်လှရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ စယ်လန့်မြေကို အဓိကထား ဖော်ပြချင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ မှားယွင်း လွဲချော်မှုရှိခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်သီးခံပေးကြဖို့ အနူးအညွှတ် ပန်ကြားလိုပါတယ်ရှင်။ သမိုင်းပညာရှင်လည်းမဟုတ်၊ ရာဇဝင်များကို ကြေညက်သူလည်းမဟုတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ ဖတ်မိထားတဲ့ မိဖုရားစောမွန်လှရဲ့ အကြောင်းလေးထဲကနေ ကောက်နှုတ်ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိဖုရားစောမွန်လှ ပန်းချီများကို ပန်းချီ ဆရာကြီး မောင်ကျော်ညွှန့် ရေးဆွဲသည့် ရာဇဝင်ထဲက မဟေသီများပြပွဲမှ ပန်းချီကားများဖြစ်ပါသည်။ ထိုပန်းချီကားပုံများကို မြလေးသျှင်ရေးသားသည့် ပန်းချီကားထဲမှ မဟေသီများ မှ အသုံးပြုပါသည်။ မိဖုရားစောမွန်လှအကြောင်းကိုတော့ စယ်လန့်ရွာရှိ စယ်လန့်နိဂမ စောမွန်လှကျောင်းမှ ဆရာတော် နာဂိတရေးသားသည့် စောမွန်လှ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းချုပ်အား မှီငြမ်းကိုးကားပါသည်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, September 03, 2011 Saturday, September 03, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ် အစားအသောက်ကဏ္ဍမှာ ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ စားလေ့ရှိတဲ့ ကချင်ရိုးရာထမင်းနယ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ ကချင်ထမင်းနယ်ကို ကချင်လို Shat Jam (ရှက်ဂျမ်) လို့ ခေါ်ပြီး အချို့ကတော့ ကချင်ဒန်ပေါက်ရယ်လို့ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒန်ပေါက်လို ချက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် ထမင်းနယ် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့သာ ပိုပြီးလိုက်ဖက်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ လွယ်ကူသက်သာပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသား အစားအစာတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်စားချင်သူများအတွက်တော့ ကချင်ရိုးရာ ထမင်းနယ် လုပ်နည်းလေးကို ဝေမျှပါရစေနော်။
ပထမဦးဆုံး ကချင်ထမင်းနယ် အတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့ မှိုကပ် (သစ်တုံးဆွေးများတွင် ပေါက်သော အရွယ်သေးသေး မှိုတစ်မျိုး) ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း မှိုအခြောက်ကို ရေစိမ်ထားပြီး ပွလာတဲ့အခါ မှိုမှာကပ်နေတဲ့ သစ်စများ၊ သဲများကို စင်ကြယ်အောင် ရေဖြင့် အခါခါ ဆေးကြောရပါတယ်။ ပြီးနောက် မှိုကို ဆား၊ အရသာမှုန့်ထည့်ပြီး ဆီအနည်းငယ်ဖြင့် ခြောက်အောင် ကြော်လိုက်ပါတယ်။
ကြက်သားကို ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဂျင်း၊ ဆား အရသာမှုန့်တို့ဖြင့် ပြုတ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် ၄င်းကြက်သားကို အနေတော်အရွယ် အမျှင်လေးများအဖြစ် မွထားလိုက်ပါတယ်။ အချို့ကတော့ ကြက်သားကြော်ကိုလည်း သုံးကြပါတယ်။
ကချင်အစားအစာတွေမှာ အမြဲပါတတ်တဲ့ ပင်စိမ်းရွက်( Basil leaves) ၊ ရှမ်းနံနံ ( Saw Leaves)၊ဖက်ဖယ်ရွက် (Laksa leaves ) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကချင်ထမင်းနယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အဆာပလာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်သေးသေး မျှင်ထားတဲ့ မျှစ်ကို ခြောက်အောင်ကြော်ထားပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ ကြက်သွန်နီကြော်၊ မှိုကပ်ကြော်၊ ကြက်သားမွှ၊ ဖက်ဖယ်၊ ရှမ်းနံနံ၊ ပင်စိမ်းရွက်၊ ငရုပ်သီးများကို နှုတ်နှုတ်စင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ပြီးသားထမင်း (သို့) ပေါင်းထားတဲ့ထမင်းကို အိုး (သို့မဟုတ်) ဇလုံတစ်ခုထဲ ခူးထည့်လိုက်ပါတယ်။ မှိုကပ်၊ မျှစ်၊ ကြက်သား၊ ကြက်သွန်ဆီချက်၊ ဖက်ဖယ်၊ပင်စိမ်း၊ ရှမ်းနံနံ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ဆား၊ အရသာမှုန့် ၊ ငရုပ်ကောင်းတို့ထည့်ပြီး နှံ့အောင် နယ်လိုက်ပါတယ်။ (ဥနီ၊ ပဲသီးများထည့်လိုက ထည့်နိုင်ပါတယ်) ။
နယ်ပြီး ထမင်းများကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ သိပ်ထည့်လိုက်ပြီး ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး အသီးအရွက်များဖြင့် အလှဆင်လိုက်ပါက စားချင်စဖွယ် ကချင်ရိုးရာထမင်းနယ်ကို ရပါပြီရှင်။
ပင်စိမ်းရွက်၊ ဖက်ဖယ်ရွက်တို့ဟာ ပူရှိန်းရှိန်းအရသာရှိပြီး မွှေးလဲ အလွန်မွှေးပါတယ်။ ကချင်ထမင်းနယ်ဟာ ပူပူရှိန်းရှိန်း ငရုပ်သီးစပ်စပ်လေးနဲ့ အလွန်ခံတွင်းတွေ့မှာ သေချာပါတယ်။
ထမင်းနယ်နဲ့ တွဲဖက်စားဖို့ အော်ဆွန်းနဲ့ မှို ချဉ်စပ်သုပ်၊ ကြက်သားကို ပြုတ်ထားတဲ့ အရည်ကို ချက်ထားတဲ့ ဟင်းချိုရယ်ပါ။
မှိုကပ်၊ ဖက်ဖယ် စတဲ့အရွက်တွေ မရှိလည်း ရှိတာလေးနဲ့ အဆင်ပြေစွာ လုပ်စားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အစားအစာချက်ပြုတ်ပုံများဟာ ဆီနည်းပြီး ဆေးဘက်ဝင် ဟင်းခတ် အမွှေး အကြိုင်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွှတ်တာကို အသိအမှတ်ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ စားစရာ ကချင်ရိုးရာ ထမင်းနယ်ဟာ စားလို့ကောင်းပြီး အရသာလည်း ရှိတဲ့အတွက် တဖြေးဖြေးနဲ့ လူသိများလာတဲ့ အစားအသောက်တစ်မျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ နေသူများအတွက်တော့ မိမိကိုယ်တိုင် မလုပ်စားဖြစ်ရင် မြေနီကုန်း ဈေးလမ်းက ကချင်ရိုးရာ အစားအစာ အစုံအလင်ရောင်းချတဲ့ “မလိခူး” ဗန်းမော်မျှစ်ချဉ် ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာ သွားရောက် စားသောက်နိုင်ပါကြောင်းရှင်။
ကချင်ပြည်နယ်သူဖြစ်တဲ့ မဂျာမုန်းကလည်း ကချင်ထမင်းနယ်အကြောင်း ရေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်ရှင်။